Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Sri Lanka » Sri Lanka na -aga mkpọchi ọhụrụ ka ọnwụ COVID na -agbago
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ Sri Lanka • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Mba ndị dị n'agwaetiti ahụ ga -eme ihe siri ike na mbọ iji gbochie mgbasa nke coronavirus, ebe ọrịa na -efe efe na ọnwụ karịrị ụlọ ọgwụ Sri Lanka, ebe ozu na ebe a na -ere ozu.
Sri Lanka kwupụtara mkpọchi ụbọchị iri ọhụrụ.
Ọnọdụ COVID-19 ọhụrụ na ọnwụ Sri Lanka na-arị elu.
Ọrịa na -efe efe na -ejupụta ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ na Sri Lanka.
A manyere Sri Lanka ịkpọ isiala nye nrụgide siri ike site n'aka ndị ọkachamara ahụike mgbe ọ dekọtara ọnụ ọgụgụ ọnwụ COVID-19 kachasị elu otu ụbọchị na mmadụ 187 na 3,793 na Wednesde wee kwupụta mkpọchi ụbọchị iri nke ga-amalite n'abalị a.
Sri Lanka akọpụtala ngụkọta nke ọrịa 372,079 kemgbe mmalite nke ntiwapụ n'afọ gara aga, yana mmadụ 6,604 nwụrụ. Ndị ọkachamara ahụike kwuru na ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ n'ezie dịkarịa ala okpukpu abụọ.
“Mkpọchi mba niile ga -amalite site n'elekere iri nke abalị taa (Ọgọst 10) ruo Mọnde (Ọgọst 20). Ọrụ niile dị mkpa ga -arụ ọrụ dịka ọ dị na mbụ, ” Minista Ahụike Keheliya Rambukwella kwuru na Twitter.
Onye minista na -ahụ maka ahụike obere, Channa Jayasumana, akpọla ụdị nje Delta "nnukwu bọmbụ gbawara na Colombo wee na -agbasa ebe ọzọ".
Ndị ọkachamara ahụike, ndị isi okpukperechi, ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na ndị ọchụnta ego akpọọla mkpọchi mba niile ozugbo iji kwụsị mgbasa nke ọrịa.
N'ịdọ aka na ntị na ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ na -erute oke ike ha, ndị dọkịta na ndị otu ọrụ rịọrọ gọọmentị ugboro ugboro ka ha weta mkpọchi.
Gọọmentị Sri Lankan na -egbu oge ime ihe a, na -ekwu maka akụ na ụba na -arịa ọrịa.
Ọrịa Sri Lanka kwa ụbọchị amụbaala okpukpu abụọ n'ime otu ọnwa ruo nkezi 3,897.
Ụlọ ọgwụ dị na mba nke nde mmadụ 21 na-ejupụta na ndị ọrịa COVID-19 ka nnukwu mgbanwe Delta na-ebufe gafere site na ọnụ ọgụgụ mmadụ.
Enwere ọtụtụ mgbochi, emechiela ụlọ akwụkwọ, gyms na ọdọ mmiri ma machibido agbamakwụkwọ na ihe nkiri egwu. Ndị ikike machibidoro oge abalị site na Mọnde, na -amachibido mmegharị site na 10pm ruo 4am kwa ụbọchị.
Ekwuputala ọrịa nke atọ nke Sri Lanka na Sinhala ọdịnala na ememme Afọ Ọhụrụ nke Tamil n'etiti ọnwa Eprel.
Na-eso a mkpọchi ọnwa, gọọmentị emepegharịrị mba ahụ na June na -adabere na usoro ịgba ọgwụ mgbochi dị ka isi atụmatụ ya iji gbochie mgbasa.
Ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị bi na Sri Lanka agbaala ọgwụ mgbochi ọ bụla, ihe ka ọtụtụ n'ime ha nwere ọgwụ mgbochi Sinopharm nke China.
Sri Lanka akwadola Pfizer, Moderna, AstraZeneca na Sputnik V nke Russia.
N'agbanyeghị ihe karịrị nde mmadụ ise n'ime nde mmadụ iri abụọ na otu na -enweta ọgwụ mgbochi abụọ, nje butere ọtụtụ mmadụ karịa ike ụlọ ọgwụ steeti na nkeonwe.